६ महिना सुस्ताएको फण्डबोर्डले गति लियो, यस्तो छ भावी कार्यदिशा - Wash Khabar
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:३८ 951 पटक हेरिएको
काठमाडौ : ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) ले गति लिन थालेको छ । ६ महिना खारेजीमा परेको फण्डबोर्ड पुनर्गठन भएपछि नियमित काम कार्वाही सुरु भएको हो ।
सरकारले गत २०७५ असार २० गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ वमोजिम “विकास समिति ऐन वमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि फण्ड बोर्ड पनि विघटनमा परेको थियो ।
जनताको खानेपानी भनेर चिनिएको फण्डबोर्डले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? बार्षिक प्रगति हासिल गर्न के –कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ? यसैको सेरोफेरोमा वास खबर डट कमले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) का सूचना अधिकारी टिका प्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
६ महिनासम्म निश्क्रिय रहेको फण्डबोर्डले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हो, फण्डबोर्ड ६ महिना सम्म सुषुप्त अवस्थामा रह्यो । तर अहिले खानेपानी मन्त्रालयबाट उप सचिव कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आउनुभएको छ । कोष विकास समितिको कार्यसमिति पनि पूरा भइसकेको छ ।
हामी अहिले सात वटै प्रदेशमा रहेका हामीसँग आबद्ध भएका सहयोगी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरु र मातहतका खानेपानी आयोजनाका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउने र प्रगति प्रतिवेदनको पुनरावलोकन, योजना निर्माण र भावी कार्यदिशा तय गर्ने चरणमा छौं । हामीले यी कामहरु पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
लामो समय निश्क्रिय रहेको फण्डबोर्ड अब यत्तिकै समाप्त होला कि भन्ने भय पनि थियो, साझेदारी संस्था र उपभोक्तालाई, कस्तो पाउनुभयो ? उनीहरुको प्रतिक्रिया ?
फण्डबोर्ड बीचमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको बेला पनि उहाँहरुले गर्नुभएकै थियो । उहाँहरुले गरेको काम, सम्पन्न गर्नुभएको योजना, उहाँहरुको बिचार र भावना कहिल्यै पनि टुटेको छैन । ६ महिना अगाडिको अवस्था जस्तो थियो, हामीलाई यो सेवा निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाई छ ।
केन्द्रीय स्तरबाट ठूला – ठूला आयोजनाहरु आए पनि दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हामीजस्ता मानिसहरुलाई थोरै घरधुरीहरु समेटेर भएपनि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको संस्था फण्डबोर्ड नै हो यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने भावना हामीले पायौं । ग्रामीण भेगमा पानीको अभावमा छट्पटाईरहेका उहाँहरुको मागलाइ पूरा गर्न वा यसलाई दिगो रुपमा लैजान विश्व बैंक सँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौ ।
उहाँहरु पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले जान्नु पर्ने कुरा पनि के रहेछ भने यो संस्थाको इज्जत, प्रतिष्ठा, आवश्यकता जे भनौं त्यो लाभान्वित समुदायले निर्धारण गर्ने रहेछ । जनताले नै भने पछि कसैले बन्द गर्न चाहेर पनि नसकिने रहेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिना त काम गर्नै नपाई बित्यो । अब बार्षिक प्रगति हासिल गर्न फण्डबोर्डले के – कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामीले एकैखाले मात्र खानेपानी आयोजनाको काम गर्दैनौं । खानेपानी प्रणालीमा हामीसँग चार/पाँच वटा मोडल छन् । ती मध्ये अलिकति अफ्ठ्यारो वा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने ओभरहेड ट्याङ्कका आयोजनाहरु छन् । त्यस्ता आयोजनाहरु जम्माजम्मी १२१ वटा छन् । यसको प्रगति मात्र अलिकति कम छ भने अन्य २५० भन्दा बढी आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।
बाँकी आयोजनाको हकमा सामग्रीको मूल्यबृद्धि भएको हुनाले त्यो बृद्धि भएको मूल्य अनुसारको रकम रिलिज गर्ने बित्तिकै ती कामहरु पनि अगाडि बढ्नेछन् । हामीले साझेदारी संस्था, उपभोक्ता समितिलाई पनि तोकिएकै समयमा काम सक्न क्रियाशील बनाएका छौं । सकभर हामी बाँकी ६ महिनामा बर्षभरिकै प्रगति हासिल गर्ने अवस्थामा पुग्छौं भन्ने लागेको छ ।
फण्डबोर्ड बारे अझै पनि कतिपय उपभोक्ता तथा उपभोक्ता समिति भ्रममा हुन सक्छ ? उहाँहरुलाई के छ सन्देश ?
हामी जुन लामो समयसम्म निश्क्रिय रह्यौं । त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँको अटल विश्वास हामी प्रति रहिरह्यो र निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि प्रयत्नशील रहनुभयो । यहाँहरुको त्यो कार्यलाई हामी सदैव सम्मान गर्छौ ।
अब झनै एक ढिक्का भएर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । हामीसँग भएको समय सीमा भित्रै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ प्रादेशिक संरचना अनुरुप भावी कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौं । विगतमा जस्तै तपाईहरुको जोश, जाँगर, सहकार्य र सहयोगको निरन्तरताको आवश्यक छ । तपाई हामी सबैको एकता र सहकार्यबाट मात्र ती कामहरु सम्भव छ ।